बेलायतको जनगणनामा नेपालीको सहभागिताबारे ‘ओएनएस’ सँग छलफल – Nepalilink
00:55 | ०५:४०
बेलायतको जनगणनामा नेपालीको सहभागिताबारे ‘ओएनएस’ सँग छलफल
लण्डन । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा आउँदो मार्च २१ का दिन हुन गइरहेको जनगणनाका बारेमा ‘सेन्टर फर नेपाल स्टडिज’ (सिएनएस) यूकेले ‘अफिस फर नेश्नल स्ट्याटिटिक्स’ (ओएनएस) सँग छलफल गरेको छ ।
माइक्रोसफ्ट टिम्समा बुधबार भएको छलफलमा ओएनएसबाट सामुदायिक साझेदारी प्रबन्धक इमिली स्टिडस्टन, ग्रिन्विच क्षेत्रका लागि नेपाली समुदायका सल्लाहकार समिर गुरुङ, ओएनएस युकेका जनसम्पर्क तथा मिडिया टीमका ग्लेन ग्यारेट र एमी वाल्कर तथा सिएनएस यूकेका तर्फबाट वरिष्ठ शोधकर्ता डा. कृष्ण अधिकारी र रिसर्च एसोसिएट नरेश खपाङ्गीमगर सहभागी थिए ।
छलफलमा प्रबन्धक स्टिडस्टनले यसवर्षको जनगणनाको तयारी कसरी भइरहेको छ र त्यसमा समुदायहरुले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिएकी थिइन् । यसपटकको जनगणनामा अनलाइनमा जोड दिइएको बताउँदै उनले अनलाइनमा पहुँच नभएका र अंग्रेजी भाषामा सहयोग आवश्यक भएकाहरूलाई सहयोगका विभिन्न उपायहरुको व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनले मार्च महिनाको सुरुवातदेखि हरेक घरमा जनगणनामा भाग लिनका लागि संकेत सहितको पत्र प्राप्त हुने र जनगणनाको वेभसाइटमा गएर आफ्नो आफ्नो परिवारको विवरण भर्न सकिने जानकारी दिइन् ।
अनलाइन फाराम भर्न नसक्ने अवस्थामा कागजकै फाराम झिकाएर जनगणनामा भाग लिन सकिने पनि उनले थपिन् । जनगणनामा नेपाली समुदायलाई लक्षित गरेर फारामको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको साथै फाराम कसरी भर्ने भन्ने बारेमा नेपालीमा निर्देशिका पनि बनाइएको उनले जानकारी दिइन् । नेपाली समुदायका लागि जनगणनाबारे पर्चा र पोष्टरहरु पनि तयार गरिएको उनको भनाइ थियो । यी सबै सन्दर्भ सामग्री मात्र भएको र फाराम भर्दा अंग्रेजीमै भर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, नेपाली समुदायका लागि सल्लाहकार समिर गुरुङले नेपाली समुदायमा जनगणनालाई सफल पार्न भइरहेका गतिविधिका बारेमा बताएका थिए । उनले आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकिएको ग्रीनवीचमा मात्र सीमित नरही बेलायतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालहरुलाई जनगणनाका बारेमा प्रचारप्रसार गरिरहेको जानकारी दिए ।
ओएनएसका जनसम्पर्क तथा मिडिया टीमका ग्लेन ग्यारेटले नेपाली मिडियालाई जनगणनाबारे आवश्यक प्रचारप्रसार सामग्री उपलब्ध गराउन आफूहरु तत्पर रहेको बताए ।
सिएनएस यूकेका डा. अधिकारीले आफ्नो संस्थाले जनगणनाको क्षेत्रमा बेलायतमा गर्दै आएको कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले सन् २००८ मा संस्थाले जनस्तरमा जनगणना सञ्चालन गरी पुस्तक, लेख प्रकाशन गरेको बताए ।
बेलायतको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपाली समुदायको सहभागिताका लागि सन् २०११ मा पनि ओएनएससितको सहकार्यमा अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै ओएनएसले सीएनएस यूकेको कामको गरेको कदर र प्रशंसा गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । यसपटकको जनगणनामा पनि सो कार्य जारी राख्ने बताए । उनले यसपटकको जनगणनाका बारेमा नेपाली समुदायलाई जानकारी दिन बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायको राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिए ।
सिएनएस यूकेका रिसर्च एसोसिएट नरेश खपाङ्गीमगरले जनगणनामा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको धेरैभन्दा धेरै सहभागिताका लागि सिएनएस यूकेले कार्य गरिरहेको बताए ।
सिएनएस यूकेले आयोजना गर्ने कुनै कार्यक्रममा ओएनएसको तर्फबाट कुनै सूचना र सहयोग चाहिए ओएनएस सो प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराइएको थियो । छलफलमा बेलायतका विभिन्न भागमा बसिरहेका नेपाली समुदायलाई जनगणनामा आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि ओएनएसका सामुदायिक सहभागिता प्रबन्धकहरुको सम्पर्क र ती स्थानका नेपाली समुदायका अगुवाहरुको सम्पर्क स्थापना गर्ने निचोड निकालिएको छ ।
ओएनएसले इङल्याण्ड र वेल्समा हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्ने गर्दछ ।